Utility Utility Ituneli yegesi Alamu isisombululo
I-tunnel esweni kunye nesisombululo esothusayo yinkqubo yolawulo ebanzi kakhulu.Ekubeni iinkqubo zobugcisa zeenkqubo ezahlukeneyo zahlukile kwaye imigangatho eyahlukeneyo yamkelwa, kunzima ukuba ezi nkqubo zihambelane kwaye ziqhagamshelane.Ukuze kwenziwe ezi nkqubo zihambelane, kungekuphela nje iimfuno ngokusingqongileyo kunye nokubeka iliso kwezixhobo, unxibelelwano kunye nolwazi lwe-geo, kodwa kunye neemfuno zokujonga umzobo ezinxulumene nentlekele kunye nesilumkiso sengozi kunye nokhuseleko lokhuseleko, kunye nokudityaniswa neenkqubo ezixhasayo. (ezifana neesistim ezothusayo kunye neminyango yokungena) kunye nonxibelelaniso neesistim zosasazo kufuneka zithathelwe ingqalelo.Ngoko ke, ingxaki yolwazi lwesiqithi esisodwa, esibangelwa yinkqubo ye-heterogeneous, ngokuqinisekileyo iya kubonakala kwinkqubo yokudibanisa kwezi zisombululo.
Esi sisombululo silawula izinto ezingundoqo ngokukhawuleza, ngokuguquguqukayo nangokuchanekileyo ukuqonda (- uqikelelo) kunye nokusombulula (- ukuqalisa izixhobo zokhuseleko okanye ukunika i-alamu) iimeko ezingakhuselekanga zokuziphatha kwabantu kunye nezinto ezingakhuselekanga kunye nezinto ezingakhuselekanga zokusingqongileyo kwaye ngaloo ndlela kuqinisekiswe ukhuseleko lwangaphakathi lwetonela elisetyenziswayo.
(1) Kukhuseleko lwabasebenzi: amakhadi e-ID yabasebenzi, izixhobo eziphathwayo ezijikelezayo kunye nezixhobo zokubala zokubona abasebenzi zisetyenziselwa ukulawula ukuziphatha okungakhuselekanga kwabantu ukuze abapatroli bakwazi ukuqonda ulawulo olubonwayo kunye nabasebenzi abangabalulekanga banokuthintelwa.
(2) Ukhuseleko lokusingqongileyo: izikhululo zokubeka iliso ezisebenzayo kunye nezinzwa ezikrelekrele zisetyenziselwa ukubeka esweni izinto eziphambili zokusingqongileyo, ezifana nobushushu betonela elisetyenziswayo, ukufuma, inqanaba lamanzi, ioksijini, i-H2S kunye ne-CH4, ngexesha lokwenyani ukuze ulawule, uchonge. , ukuvavanya nokulawula imithombo yengozi kunye nokuphelisa izinto ezingakhuselekanga zokusingqongileyo.
(3) Kukhuseleko lwezixhobo: i-sensor ezihlakaniphile, iimitha kunye nezikhululo zokubeka iliso ezisebenzayo zisetyenziselwa ukuqonda i-intanethi ye-intanethi, idibaniso eyoyikisayo, i-remote control, umyalelo kunye nokuthunyelwa kokubeka iliso, i-drainage, umoya, unxibelelwano, ukucima umlilo, izixhobo zokukhanyisa kunye nobushushu bentambo kunye nokwenza. bekwimo ekhuselekileyo ngalo lonke ixesha.
(4) Kukhuseleko lolawulo: iindlela zokhuseleko kunye neenkqubo zolawulo lokulumkisa kwangaphambili zisekwe ukuze kubonwe ukubonwa kweziza, iingxaki kunye neengxaki ezifihliweyo, ukuze kuqatshelwe impazamo engu-0 ngokubhekiselele kulawulo, umyalelo kunye nokusebenza.Ngale ndlela, amanyathelo okhuseleko athatyathwa, ukulumkisa kwangaphambili kunokunikwa kwangaphambili, kwaye iingxaki ezifihliweyo zinokupheliswa ngelixa zise-bud.
Injongo yokwakhiwa kwetonela yosetyenziso lwasezidolophini kukuqonda ukuzenzela okusekwe kulawulo olunolwazi, ukwenza ubukrelekrele bugqume yonke inkqubo yetonela yosetyenziso kunye nenkqubo yolawulo, kunye nokuqonda itonela esebenzayo edibeneyo esebenzayo, eyonga amandla, ekhuselekileyo kunye nolawulo oluhambelana nokusingqongileyo. kunye nokusebenza.
Ixesha lokuposa: Sep-15-2021
umtshini wegesi osisigxina, IAlam yerhasi etshayo, umtshini wegesi onokutsha, China Gas Detector, isixhobo segesi, Isikhangeli segesi se-lpg,